Wacaal Daray ah: Ciidamada amaanka Bosaaso oo fashiliyay qarax (dhegayso) – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Ciidamada amaanka Bosaaso oo fashiliyay qarax (dhegayso)
Seteembar 18, 2017 1:59 g 1
Ciidmada amaanka ee magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ku guulaystay inay fashiliyaan qarax la doonayay in laga gaysto magaalada Bosaso kadib markii ay soo wargeliyaan shacabka.
Qaraxa oo ku jiray bacaha nooca madow ee lagu adeegto ayaa la dhigay meel u dhow istaanka ay ka baxaan baabuurta aada magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, ayna ku yaaliin goobo ganacsi waana iridka laga galo suuqa wayn ee magaalada Bosaso.
Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari oo la hadlay radio Daljir ayaa sheegay inay shacabku soo wargeliyeen, dabadeedna ay ciidamadu xiraan aagga qaraxaasi lasoo dhigay iyo dhamaan goobihii ganacsiga ee ku yiilay, waxaana uu sheegay galabta inay ciidamadu qaraxiyeen qaraxaasi, taasi oo aan gaysan wax khasaare ah.
Qiiq ama uuro madow ayaa galabta hal mar la arkayay magaalada Bosaso xaafadaheeda kalle duwan iyo jug culus.
Yasin Mohamed Osman 4 years ago
Ilaah baa mahadleh ka badbaadiyay
Ciidankuna way ku mahadsanyihiin
Shaqada ay qabteen.
Waan ay ahacabka iyo ciidabku isku xirnaadan si looga hortago dhibaatooyinka ay gaysanayaan argagixisada & saaxiibadood.